XOG+Sawiro: Maxaa ka jira wararka sheegaya Agaasime kuxigeenka Villa Somalia in Xilkii laga qaaday.. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG+Sawiro: Maxaa ka jira wararka sheegaya Agaasime kuxigeenka Villa Somalia in Xilkii...
XOG+Sawiro: Maxaa ka jira wararka sheegaya Agaasime kuxigeenka Villa Somalia in Xilkii laga qaaday..
Madaxtooyada Somalia ayaa beenisay wararka sheegaya in xilkii laga qaaday agaasime kuxigeenka maamulka iyo maaliyada ee Villa Somalia, Drs Aamino Siciid.
Saacidihii lasoo dhaafay, waxaa qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan iyo baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in Drs Aamino Siciid xilkii laga qaaday balse waxaa xariir toos ah la sameynay Villa Somalia waxaana ku ogaanay in warkaasi uu yahay been abuur.
Drs Aamino ayaa maanta ku jirtay shaqo maalmeedkeedii caadiga ahaa, waxaa ay Villa Somalia sheegtay in Aamino ay tahay xubin muhiim ah iyo qof karti badan oo wax badan ku kordhisay guriga looga arimiyo Somalia.
Waxaaan ogaanay in wararkan been abuurka ah ay faafiyeen xubno si dadban ula shaqeeya madaxtooyada iyo kuwa horey looga eryay Villa Somalia. Faafinta warkaan been abuurka ah ayaa lagu bixiyay lacago si loo bahdilo agaasime kuxigeenka maamulka iyo maaliyada ee madaxtooyada.
Tan iyo markii Aamino Siciid loo magacaabay agaasimaha maamulka iyo maaliyada ee Villa Somalia,waxaa is badal laga dareemay howlaha shaqada, billicda iyo hanaanka maaliyada ee Madaxtooyada.
Previous articleDAAWO: Fannaankii Axmed Biif oo Farriin uu la ilmeeyay Dadka Soomaalida uga soo diray Xaramka barakeysan
Next articleXOG+Sawiro: Maxaa ka jira wararka sheegaya Agaasime kuxigeenka Villa Somalia in Xilkii laga qaaday..
Injineero Turki ah, askar iyo dad kale oo ku dhintay qaraxii Ex-Koontarool Afgooye
Muxuu Aadan Barre ka yiri xil ka qaadistiisa?
Sawirro:-Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo La Kulmay Ugaas Xasan Ugaas
DAAWO:BBC oo caawa baahisay barnaamish xog badan lagu kashifay oo kusaabsan Khilaafka DF&Maamul goboleedyada
Muqdisho oo ay ka dhacday QISO muujinaysa isbeddel dadka ku dhacay!
Toos Udaawo muqaaladii weerarkii goor dhow kadhacay Muqdisho iyo muqaalo argagax leh oo kujiraan iyo dagaalkii oo toos ah
DHAGEYSO: Cumar Filish Oo Amar Culus Ku Soo Rogay Shacabka Muqdisho
SAWIRO:RW Khayre Oo Xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Cusub Ee Sweden ogow waxaa ay kawada hadlen
Ma ogtahay magaalada ay ku nool yihiin maalqabeennada ugu badan caalamka ee 2019?
DEG DEG SAWIRO: Qarax xoog leh oo ka dhacay Magaalo ku taalla dalka Jarmalka & Khasaare culus oo…